मेरो "VO COC" हेर्दै - भियतनाम अध्ययनहरूको पवित्र भूमि
681 दृश्य0टिप्पणिहरु
यो दिउँसो भएको थियो, म उहाँसँग झूट बोलेर मेरी आमाबाट उम्कें कि म र मेरा साथीहरूको समूह उहाँहरू र कुकुरसँग लामो रेलमा जानको लागि मेरा शिक्षकहरूलाई भेट्न गयौं। मेरो प्रारम्भिक भावना धेरै अनौंठो र डराएको थियो। उसको दाहिने हातले बोरा राख्यो, र मेरो दाहिने हातले आफ्नो देब्रे हात समात्नुभयो। हामी दुबै रेल सडकमा हिंड्यौं र डोरीमा सर्कसका दुई जना कलाकारहरूको रूपमा सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गार ढोका पार गर्न, घरबाट पछाडिबाट गरीब घरहरू, फोहोर फोहोर र शौचालय ब्लकहरू - "एक जना ड्युटीमा थिए"। सडक अनन्त देखिन्थ्यो। त्यसोभए कुकुरहरू भुँक्यो “कुकुरले घर नजिकै भएको फाइदा उठाउँछन्”। बोतलको कुकुर यसको खुट्टाको बीचमा यसको पुच्छरसँग मौन थियो, किनकि यो अर्को डोमेनमा हो भनेर थाहा थियो! बोतलहरु केटाले मलाई अरबी पुरानो कथा जस्तै चुपचाप हिंड्न भन्यो "कुकुरको भौंकने, यात्रा यात्रु सुरु गर्दै।" (लेस चियन्स अबियन्ट कारवाँस पसेन्ट)।
Go! त्यसोभए सधैंभरि जानुहोस्! कहिलेकाँही उसले ट्र्याकमा केहि लिनको लागि रोक्नुपर्‍यो। ढिलो अपराह्नसम्म, उसले मलाई फोहोर सडकहरूमा लैजानभयो, अब हामी छिट्टै एउटा गरिब घर भएको ठाउँमा गयौं। हिबिस्कसको बारले घेरेको एउटा आँगन थियो। यो चहकिलो आँखा, सतर्कता, सानो मार्शल आर्ट मास्टरको घर थियो।
अप्रत्याशित रूपमा मैले एकाग्रताका साथ गुरुको खबरा तर बलियो हातहरू हेरें जब उनले टाउकोलाई दश औंलाले उभिरहेको थियो - जसरी महिला ब्याले नर्तकहरू खुट्टाको टिप्सहरू लिएर उभिरहेका थिए। तर उसको कलाई, मुठ्ठी, जब उसले आफ्नै शैलीले मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन गर्थ्यो, कहिलेकाहीं मलाई लाग्थ्यो उसको हातले चोरको हात भाँचेको छ, कहिले काहिं आमाको हातले आफ्नो नवजात शिशुलाई मसाज गर्न।
उनको अनुसार मानव कलाई मुट्ठी, कुनै पनि मार्शल आर्ट शाखा को लात, र दुई मुक्का को रूप मा मानव मुट्ठी अवरुद्ध गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ (चित्रा 1)। तर पञ्चहरू खोलिंदा तिनीहरू यम र याangको सौहार्दको लागि हेरचाह गरिरहेका वा मानव शरीरमा खतरनाक ठाउँ पत्ता लगाउन जडिबुटी चिकित्सकको रूपमा मानव शरीरलाई स्याहार गर्ने दयालु आमाको पाम-पात रेनकोट जस्तो देखिन्छन्!
चित्र १: एक मुट्ठी
तर मैले शिक्षकको अवैध कलाई हड्डीलाई ध्यान दिएँ। यो हड्डी नयाँ जनावरको सीs जस्तो देखिन्थ्यो। मैले यसलाई नाडी वा पायल भने (हड्डी फैलदै) (चित्रा 2) पायलबाट छुट्टिनु (१ 1979।, मा मैले साइगोन मार्शल आर्ट अखबार पढें जुन यस हड्डीको वर्णन थियो)। भनिन्छ कि Qianlong को शासनकाल मा (चीन), महान मास्टर Ngu माई, व्हाइट क्रेन माउन्टेनको एक ननले मार्शल आर्ट प्रविधिहरू यस हड्डीद्वारा अभ्यास गर्‍यो। उनले भनिन् यो हड्डी हो "मोहर" of प्लूटो (अंडरवर्ल्डको शासक)मतलब प्लूटो छाप। यो बाट "सील" प्लूटोले खतरनाक बिन्दु र मानव शरीरमा शिरामा आक्रमण गरे जुन उनले भित्तामा चित्रण गरिरहेको थियो र एक्यूपंक्चर बिन्दुहरूको संख्या (चित्रा 3)।
चित्र २: कार्पल टनेल सिन्ड्रोम
चित्र:: चिकित्सा संसारको दृश्यमा कार्पल टनेल सिन्ड्रोम
एक वा दुई पटक उहाँ बस्नुभयो र धुम्रपान पाइप धूम्रपान गर्नुभयो र आकाशमा तम्बाकूको धुवाँ उडाएपछि चिया घुस्यो, उसले आन्तरिक मार्शल आर्ट विधिका बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्यो जुन उनले भने कि शाओलिन मार्शल आर्ट व्यायाम गर्नुहोस्।
उनको अनुसार, आन्तरिक मार्शल आर्ट भनेको हामीले चाहेको अनुसार शक्ति र टेन्डन र हड्डीहरू व्यायाम गर्न शक्ति केन्द्रित गर्ने विधिहरू थिए। तर हामीले अवस्थाहरूको अभ्यास गर्नुपर्‍यो: बसेर र उभिनु।
चित्र:: यदि प्रेशर पोइन्टमा प्रहार गरीएको छ भने अंक बिन्दु १: तुरुन्तै मर्नुहोस् (दुई भौहें बीच) - दबाव बिन्दु २: दुई हतियारहरू पक्षाघात गर्नुहोस् (कुहिनिको पछाडि) - दबाव बिन्दु:: खोक्रा रगत र बेहोशी गर्नुहोस् (काँध) - दबाव बिन्दु:: सम्पूर्ण हात लकवा (palm को प्रेशर पोइन्टको बिरूद्ध पाम) - दबाव बिन्दु:: बाहुलाई पक्षाघात गर्नुहोस् (नाडी) - दबाव point: तुरन्त स्ट्रोक बनाउनुहोस् (घुडाको छेउमा) - दबाव 7: बेहोश (शिन) - दबाव 8: पित्त बान्ता र बेहोशी गर्नुहोस् (खुट्टाको माथि) - दबाव बिन्दु:: दुबै खुट्टा सुन्नकुर्कुच्चो).
उसले भन्यो: "मार्शल आर्ट सिक्नु पहिले सही आधारभूत प्रविधिहरू सिक्नु" जसको मतलब हो "ब्याट कय चान क्विन - एक बच्चा मार्शल आर्ट मा आठ ट्रिगरको आधारभूत प्रविधिको साथ हिंड्न को रूप मा। त्यसोभए उनले मलाई स्टाफ, तरवार, स्किमिटरका फार्महरू देखाए…
एक भिक्षु जपको रूपमा - वा व्यक्ति धाराको छेउमा अँध्यारो चाँदनीमा कथा र कविता पढ्ने - उनले आठ मार्शल आर्ट कविताहरू गाए। म ती रोमान्टिक कविताहरूसँग बिस्तारै हुर्कें - ह्याममाक वा डु enjoy्गामा रमाउनको लागि होइन - तर अभ्यास गर्नै पर्छ स्थिति, सर्प रुख, जेन शिक्षक प्रविधी, जादू छडी टेकनीक, यिन र यांग ब्लक, चलिरहेको घोडा प्रविधि, क्रेन रुख (एकल खुट्टा अडान), ... अर्ध चन्द्रमाको रातमा, त्यसपछि पूर्णिमा ... कतैबाट आउने शत्रु प्रभावलाई स्वागत गर्न तयार भएको रूपमा।
तर सब भन्दा चाखलाग्दो घटना भनेको उनको चाड हो "Vo Coc" धेरै जसो विद्यार्थीहरू समूह पेशेवर भिखारी, केटाहरू र केटीहरू थिए, भिखारीहरू, पेडियाक्याब ड्राइभरहरू, क्यान्डी पुल विक्रेताहरू, आइसक्रिम विक्रेताहरू, फोहोर स collect्कलनकर्ताहरू र तिनीहरूमध्ये म त्यहाँ थिए - उहाँको अनौंठो विद्यार्थी, "चिल्लो छाला"। ऊ र बोतल केटा - बुबा थड, युवा टोड - को रूपमा नृत्य प्रदर्शन "शेन्डोंग औषधि शो" (चित्र))। जापानका जुडो, आइकिडो वा सुमो व्यवसायीहरू भन्दा उनीहरूको आफ्नै शैलीको साथ प्रत्येक व्यक्तिले समुद्री किनारमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्‍यो। मैले देखें "ठिटो केटा" जम्पिing किक प्रदर्शन गर्नुहोस् जबकि अर्को एउटा दाहिने खुट्टा पछाडि तानियो, देब्रे खुट्टा बाहिर धकेलीयो। त्यसो भए "टोड केटी" दुई उत्तल हड्डी संग एक गार्ड स्थिति बनाउन घोडा सवारी अडान मा उभिए। एकाएकी केटो केटले शिनबोनले हिपमा लात हान्दै - यो एक द्वारा अवरुद्ध भयो "प्लूटोको छाप" तुरुन्तै।
चित्र:: भो कोक - नुइएन म्यान ह Hung
त्यसपछि क्यान्डी पुल विक्रेता, जसलाई मैले माथिल्लो हेमलेटमा कतै धेरै चोटि भेटें, पनि प्रदर्शन गरे। म अझै पनि समस्याको आलोचना गर्न उनको बिक्री कुरा सम्झन्छु "कुनै पनि महिला जसलाई उनका पतिले छोडेका छन्, केवल पाँच सेन्टी क्यान्डी किन्नुहोस् र पतिहरूले सधैंभरि रहन मनपर्नेछ"। ऊ आत्मरक्षाको लागि एक मार्शल आर्ट व्यवसायी भयो। उहाँ आफ्नो खुट्टामा क्रutchचको साथ एउटा खुट्टाले जमीनमा उफ्रनुभयो। किनभने एउटा खुट्टाले उफ्रँदैछ त्यसैले ऊ क्रुचको साथ तल झरे। अप्रत्याशित रूपमा उनले काँधमा मार्शल आर्ट प्रदर्शन गर्नुभयो खुट्टाले आकाशमा घुमायो। उसको बैसाखी - उसको काठको खुट्टा - स्पिनि top शीर्षको रूपमा उड्यो।
पछि, मैले यसलाई आधुनिकको रूपमा सोचेँ "हिप हप"। सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका जब ऊ बाहिर उत्रियो। त्यतिखेर, एक विद्यार्थीले उनको लागि काठको डमी ल्याए जुन उसको टाउको केवल निधारको बीचमा कालो थोप्लाहरू संग खींच्यो। अर्को स्कुलवाइले उसको खुट्टामा पाउडर बनाए - त्यहाँ बायाँ र दायाँ खुट्टामा दुई हड्डीहरू थिए। के को लागि? मलाई थाहा छैन।
बोतलको केटाले भन्दा पहिले ऊ भूईमा प्रदर्शन गर्‍यो। त्यसपछि उसको देब्रे खुट्टा टिप्टियो र उसको दाहिने खुट्टा उफ्र्यो र दायाँ खुट्टाले लात हिर्कायो ड्मीको निधारमा कालो पोइन्टमा सेतो दागसँग। त्यसपछि ऊ फर्कियो जब दायाँ खुट्टा भुइँमा छुँदा, उसको देब्रे खुट्टा फेरि टिप्टियो र दाहिने खुट्टा उफ्रियो र डमीको निधारमा छुने गरी निधारको बीचमा अर्को सेतो दाग बनायो। यो जस्तो, उहाँ एनीको हड्डीको दुई हड्डी संग डमीको निधारको बीच मा छुनुभयो। यदि यो एक डमी थिएन भने एक मानिस तुरुन्तै मरेको थियो। प्रविधी के थियो? मलाई अचम्म लाग्यो।
केहि समय मैले उसलाई सोधें: "आन्तरिक मार्शल आर्ट के हो?" ईथरियल अवधारणा एक जादू जस्तो लाग्न सक्छ, र यो भनियो कि "मांसपेशीहरू तन्काउनको लागि अभ्यास गर्न" जुन छुरीले काट्न सक्दैन ?! मेरी आमाले भनिन्, "यो तब हो जब शेन्डong्ग मार्शल आर्ट मेडिसिन प्रदर्शन - सबैलाई ठग्न" Adhesive प्लास्टर चिह्नित सर्प "बेच्नका लागि विज्ञापन गर्न। हुर्कदै गरेको मलाई थाहा थियो कि दु: खको समयमा, कहिलेकाँही गलत चीज सत्य हुन सक्छ, तर सत्य कहिलेकाँही गलत हुन्छ ...
त्यसोभए “गोong्ग मार्शल आर्ट” भनेको मालिशलाई औषधीको साथ जोड्ने र मानव छालालाई भैंसाको छाला हुने बित्तिकै मांसपेशीहरूको अभ्यास गर्ने बानी परेको छ, जसलाई काटिनु हुँदैन?!… जहाँ जंगली जनावरहरू विरुद्ध लड्न सक्ने किig्गोong्ग छ? वा डाकुहरू।
आन्तरिक मार्शल आर्ट एक कुशल परिष्कृत विधि मानिन्छ। यो मूलत: मानवजातिको मार्शल आर्टका सबै शाखाहरू हो, मात्र होईन शाओलिन मार्शल आर्ट स्कूल। त्यो एक हो "गुप्त विधि" प्रत्येक मार्शल आर्ट स्कूलको बोधिधर्म, यस प्रकारको महान् मास्टरको अत्यधिक सक्षम, लडाई गर्नु अघि क्यूईको शक्ति कायम राख्न। त्यस्को मतलब: "मांसपेशिहरूको शक्ति र शारीरिक सहनशक्ति थप्न उत्साहित हुनेछ वा अभ्यास गरेन भने तल ओसिलो हुनेछ!"
यस प्रकार तीन कारकहरू: मानसिक, शारीरिक स्थिति र लड्न इच्छाशक्ति एक साथ भेला हुनेछ एक निरपेक्ष शक्ति र प्रत्येक पटक, प्रत्येक ठाउँमा लागू गर्न स्थिरता गठन गर्न। यस समय बाट मार्शल आर्ट चिकित्सकहरु विचार गर्न बाध्य गर्न को लागी celiac जीवन शक्ति बनाउँछ "डान्टेन" बाट आउँछ। यो शरीरको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र हो जहाँ शरीरमा सञ्चालन हुने ब्यालेन्स त्यसपछि सुरूवात बिन्दुमा फर्कन्छ।
जीवन शक्ति संचालन गर्न, एक 12 सिट स्थिति अभ्यास गर्नु पर्छ (चित्र)) भावनाहरू दबाउन असामान्य दिमागलाई जोगाउन निरन्तर नियमित रूपमा विनियमित हुन, मानसिक स्थिरतालाई जोगाउँदै, उर्जाको लागि प्राकृतिक मुड। उसले मलाई भन्यो: "यस प्रकारको तालिम पाइसकेपछि कसैले शरीरमा बलियो गिट्टी ढु stones्गा बोक्न सक्छ वा फलामको बारले दायाँ पछाडि हिर्काउन सक्छ"।
सबै सिक्न भो कोक, मलाई १ 1969। In मा भएको गूढ मुद्रा सिकाइएको थियो(1) मैले पढेको छु मार्शल आर्ट सिद्धान्तहरू र प्रशिक्षण विधिहरूको बारेमा एक पत्रिका आन्तरिक मार्शल आर्टका लागि, कि उनी पारित भए वा लगभग त्यस्तै! म यी पाठकहरूलाई रमाईलो गर्न देखाउँछु।
नजिकका दिनहरूमा, जब म ठूलो भएँ मैले महसुस गरें कि ऊ जापानी जुजिट्सु, जापानी आइकिडोबाट प्रभावित छ कि छैन? यसबाहेक, ऊ चिनियाँ "किगोंग" सिकेको हुन सक्छ। जस्तो भो भो, मैले सोचे कि उनी अफ्रिकी मार्शल आर्ट वा दक्षिणपूर्व एशियाबाट प्रभावित थिए।
त्यस समयमा मैले त्यस्तो सोचेँ तर सोचेँ कि यो पनि निश्चित स्थानहरूबाट, निश्चित समयावधिमा वा चीनको मिथकबाट आउन सक्छ।
कहिलेकाँही उनले वर्णन गरे "विपक्षीको शक्ति फुक्न दिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई हावी गर्नुहोस्"। यसको मतलब जब उसले हमला गर्छ, हामी तुरुन्तै टाढा रहन्छौं। त्यसोभए सन्तुलन गुमाउनुपर्दा ऊ कमजोर हुन्छ, हामी हाम्रै प्रतिवाद गर्ने अवसर लिन्छौं।
मैले उसलाई हेरें तर वास्तवमा मैले उसको खुट्टा र औंलाहरूमा हेरे। उनले कसरी प्रशिक्षण दिए कि उनीहरू छेस्को जस्तो देखिन्थ्यो जुन उनीहरूले प्रयोग गरे "खतरनाक ठाउँहरूमा हिट"। मानव शरीरमा खतरनाक ठाउँ के हो? त्यतिखेर म केहि बुझ्नको लागि एकदमै कलिलो थिएँ! पछि, साइगन विश्वविद्यालयमा मैले एउटा काम खोज्ने कोशिश गरें "सम्राट आन्तरिक पुस्तक" जसले १० 108 स्पटहरू वर्णन गर्‍यो र तीन प्रकारमा विभाजित गरियो: मृत स्थल, असंवेदनशील स्थल र प्रत्यक्ष स्पटहरू। जब औंला हिट हुन्छ मृत स्थल यदि तत्काल मरेन भने ऊ पछि मर्दछ। यी मृत स्थल टाउको, छाती, मेरुदण्डमा मात्र केन्द्रित हुँदैन, तर हात वा खुट्टामा पनि खुट्टाको बीचमा स्पट (हुयेट गोबर तूएन), हथेली मा दाग (huyet lao cong)। मा हिट असंवेदनशील ठाउँहरू हतियार, खुट्टाहरू, काँधमा हड्डीहरू, र मरेको छैन भने, विपक्षी होश हराउँछ। (चित्र,,))
चित्र 5: आसनहरू राख्नु
अलग देखि दागहरूत्यहाँ छन् खतरनाक ठाउँहरू जोड्ने मानव शरीरमा जो औंलाहरु, घाँटी, खुट्टा, पखेटा जोड़, काँध र घुँडा मा ध्यान केन्द्रित। जापानी मार्शल आर्ट चिकित्सक प्रायः घुमाएर आक्रमण गर्दछन्, मानव शरीरमा जोर्नीहरूलाई झुकाएर। जुजिट्सु चिकित्सकहरू सामान्यतया समात्नुहोस्, समात्नुहोस् - चिन ना भनिन्छ - (चित्रा 8) हतियार मा मांसपेशिहरु (माउस मांसपेशी भनिन्छ), वा कुहिनिको बीचमा। हातको पछाडि पनि जुजित्सु चिकित्सकहरूले थिच्न, चिमट्न सक्छन्।
एकपटक मैले शिक्षक डाडपस-अपस्बी १० औंलाहरू र मैले पढेका १० औंलाहरू देखे, यो बाघ शैलीको विधि थियो। यो मार्शल आर्टको बारेमा कुरा गर्ने र कुरा गर्ने बित्तिकै अनन्त हुनेछ, तर म आश्चर्य गर्दछु, "मार्शल आर्ट के हो?"
के हो मार्शल आर्टको शाखा or को अध्ययन मार्शल आर्ट कि मानिसहरूलाई उनीहरूले बनाएको हो कि?
चित्र,,:: एक्यूपंक्चर-पोइन्ट-on-the-the-----the---the------शरीर-पछाडि-स्थान - एक्यूपंक्चर - शरीरको अगाडि points पोइन्ट
म सोचमा रहें ...
१. भ्यान क्वा भि, आन्तरिक मार्शल आर्ट, सिद्धान्त र विधि, मार्शल आर्ट पत्रिका, नं 1, जून १st, 1969 (साइगन).
◊ मेरो "Vo Coc" खोजी गर्दैछ - Vi-VersiGoo
My मेरो "भो कोक" खोज्दै - फ्र-वर्सिगु
(देखिएको 172 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 105
← मलाई "VO COC" हान्ने मास्टरहरू
भियतनाम नामको अध्ययनको पवित्र भूमि - पवित्र भूमि →
आजको भ्रमण: 688
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 7,758
कुल भ्रमण: 82,290